Maamulka Dugsiga Agoomaha Ee Kuweyt Ka Dhistay Hargeysa Oo Qirtay Fadeexado Loo Jeedinayey |
Maamulka Dugsiga Agoomaha Ee Kuweyt Ka Dhistay Hargeysa Oo Qirtay Fadeexado Loo Jeedinayey
Maamulka dugsiga agoomaha ee dawladda Kuwuit ka dhistay magaalada Hargeysa, ayaa markii ugu horraysay si cad u qirtay inay lacago caddaan ah ka qaadaan ardayda wax ka barata dugsigaas, waxana uu shaaciyey inay jiraan arday tiro badan oo aan agoomo ahayn, kuwaas oo uu dakhli badani kasoo galo gudsigaas umadda loogu sheegay inuu yahay mid khayri ah.
Shir jaraa’id oo uu maamulka dugsigaasi maalintii shalay ku qabtay xaruntiisa magaalada Hargeysa, ayuu faahfaahin kaga bixiyey jiritaanka eedo soo noqnoqday oo dugsigaas iyo qaabka uu danyarta iyo agoomaha ula macaamilo loo jeedinayey, waxana uu tilmaamay inay jiraan arday tiro badan oo uu dugsigaasi si joogto ah lacago uga qaato.
Jaamac oo magaca dugsigaas ku hadlay, ayaa qirtay warar soo baxayey oo sheegayey in dugsigaasi isku beddelay mid dakhli ka raadiya ciddi ay dalwadda reer Kuwait ugu soo tabarucday, isla-markaana isha ka duwan danyartii iyo agoomihii loo qoondeeyey inay wax ka bartaan, waxana marka hadalkiisa la eego caddaatay warkii sheegayey in ubadka wasiirrada iyo dadka ladani dhaleen ay dugsigaas buux dhaafiyeen.
Ibraahim Nuur waxa uu xusay in tiro gaadhaysa 124-arday ay dugsigaas lacago bishii ka bixiyaan, isaga oo daaha saaray ama qariyey qaddarka lacagta rasmiga ah ee laga qaado, isagoo sidoo kale tirada agoomaha ku sheegay in ka badan afar boqol oo arday.
Waxa uu sidoo kale qariyey qayb waxbarashada dhinaca farsamada agabka guryaha iyo xafiisyada(furniture)oo uu dugsigaasi leeyahay, taas oo dadka diyaarka u ah inay wax ka bartaan laga qaadayo lacago xad-dhaaf, isla-markaana loo diiday dadkii danyarta ahaa oo ah cidda sharciyan loo qoondeeyey inay farsamadaas barato.
Ibraahim Nuur Jaamac sidoo kale warka uu saxaafadda siiyey kuma uu sheegin sababta keentay in dadkii agoomaha ahaa iyo kuwii danyarta ahaa loo diido inay carruurtooda dugsigaas ka diiwaangeliyaan, isla-markaana xataa cidda la qorayo weji iyo garasho lagu qoro, iyada oo ciddii xaq u lahaydna si cad looga weji dadbo.
Sidoo kale waxa uu masuulkani meesha ka saaray ama uu quudhsaday lacagaha hay’adaha dugsiga gacanta ku hayaa sida joogtada ah usiiyaan maamulka dugsiga, waxana uu lacagta laga qaado ardayda aan agoomaha ahayn ee dugsigaas dhigata ku tilmaamay mid lagu daboolo baahiyaha dugsiga.
Marka la eego hadalka ninka ku hadlay magaca dugsigan iyo weliba qiraalkiisa la xidhiidha in ubadkii tujaarta magaaladu wax ka bartaan dugsigii agoomaha loogu talo galay, waxa weli xukuumadda, gaar ahaan madaxtooyada hortaalla tallaabadii laga qaadi lahaa kuwa agoomaha iyo danyarta xuquuqdooda danahooda gaarka ah iyo sidii ay dhaqaale u heli lahaayeen u isticmaalaya, waxana waajib ah in si buuxda warbixinaha dugsigan loogu diro hay’adii masuulka ka ahayd.